विचार - Akhabar Nepal
कोरोनाले भयभीत बनाएको सन् २०२० को बिदाई गर्दै विश्वभर नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको छ । अंग्रेजी नयाँ बर्ष सन् २०२० अरु बर्षहरुभन्दा धेरै फरक र पिडादायी भएर वितेको छ ।…
बैनी, हामीले अर्जुन खालिङलाई भुलेका छैनौं !
२०७७, २८ मंसिर आईतवार १८:३९
विषय प्रवेश अर्जुन खालिङको अकल्पनीय मृत्यु पछि किरात राई लेखक सङ्घको अध्यक्षको भार मलाई आईलाग्यो । यतिबेला सिङ्गो लेखक सङ्घ ‘साकेला साहित्य महोत्सव’को तयारीमा जुटिरहेको छ । महोत्सवलाई कसरी उपलब्धीमुलक…
हामी सबैलाई अनुभव छ, पहिले र अहिलेको नेपाली समाज कस्तो छ । नेपाल देश सानो भए पनि यहाँ धेरै जात, धर्म, संस्कृति र परम्पराले भरिएको छ । नेपाली समाजमा हामी…
यतिबेला काठमाडौ उपत्यका लगायत देशभर चिसो ह्वात्तै बढेको छ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने क्रम जारी रहँदा चिसो मौसम पनि सुरु भएको छ । अचेल नेपालमा दैनिक ८/१० जनाको संख्यामा…
नेपाल बचाउनको लागि राजसंस्था अपरिहार्य
२०७७, १२ कार्तिक बुधबार ०८:०८
नेपाल बचाउनको लागि पनि राजसंस्थालाई अपरिहार्य शक्तिको रुपमा मानिन्छ । नेपाल अरु देश जस्तो होइन । राजसंस्थाको अभावमा यहाँ यी दुबै देशका अनेकौं दबाब र षड्यन्त्रबाट यहाँको सार्वभौम सत्तामा नैं…
२०७७, ७ कार्तिक शुक्रबार ११:०६
क्राउडवानलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा मिश्रित समाचारहरू सम्प्रेषित भइरहेको वास्तविकता सर्वविदितै छ । तथापि ती समाचारहरूमा कुन हदसम्म सत्यतथ्य बाहिर आए त ? भन्ने सवालमा हामी घोत्लिर्यौ । कतिपयले विगतकै…
२०७७, २३ आश्विन शुक्रबार ०८:०९
विश्व साम्यावादी क्रान्तिको विचारधारा र संगठन निर्माणमा कार्ल मार्क्स प्रमुख तथा फ्रेडरिक एङ्गेल्स सहायक बनेर महान कार्य प्रारम्भ गरे। प्रमुखमा हुनुपर्ने असाधारण गुणसहित मार्क्सले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। मानिस हुनुको…